Tambajotran-jiolahy :: Nisambotra mpaka an-keriny enina ambin’ny folo mianadahy ny zandary • AoRaha
Tambajotran-jiolahy Nisambotra mpaka an-keriny enina ambin’ny folo mianadahy ny zandary
Ravan’ny Zandarimaria ny tambajotran’ny mpaka an-keriny miaraka amin’ilay lehilahy antsoina hoe Del Kely, izay voatondro ho mpitarika an’ity fikambananjiolahy mahery vaika ity. Olona enina ambin’ny folo, miandahy miambavy, no nasehon’ny zandary teny Ankadilalana, omaly, niaraka tamin’ny basy mahery vaika « Kalachnikov » miisa telo sy « Mas 36 » miisa telo. Misy lehiben’ny fokontany amin’ireto voatondro ho jiolahy mpaka an-keriny ireto.
Niafara tamin’izao fisamborana andian’olona izao ny fahatrarana an’i Del Kely, tany Morarano Gara avaratr’i Moramanga, tamin’ny marainan’ny 13 mey lasa teo. Namoy ny ainy noho ny ratra teo amin’ny feny izy rehefa nisy ny fifanjevoana tamin’ny fisamborana azy. Nilaza ho nanao izay azo natao rehetra tamin’ny fitsaboana an’i Del Kely ny zandary saingy namoy ny ainy tao amin’ny hopitaly tokony tamin’ny 6 ora hariva, ny 13 mey ihany, io voatondro ho raindahin’ ny mpaka an-keriny io.
Talohan’izay dia voalaza fa nitantara an’ireo asa ratsy nataony sy nanondro ny mombamomba an’ireo namany mbola tsy voasambotra izy. « Isan’ny naborany ny namonoany ho faty ny zandary telo tamin’ny herintaona ka ny roa tamin’ireo no niasa teto Analamanga tany Anjozorobe », hoy ny kolonely Randrianarivelo Anissé, lehiben’ny Vondrontobim-pileovan’ny Zandarimaria Analamanga isan’ireo nisambotra an’i Del Kely tany Morarano Gara.
« Misy naman’ireto mpaka an-keriny ireo no mbola miriaria any. Isaorana ny fanampian’ireo tsara sitrapo tamin’ny fanomezambaovao. Manao antso hatrany izahay fa tombontsoan’ ny besinimaro ny faharavan’ny tambajotran-jiolahy toy izao, ka tokony hifanampy sy mifampatoky ny mpitandro filaminana sy ny tsirairay amin’ny fanomezam-baovao. Arovanay ny tsiambaratelon’izay manome vaovao », hoy kosa ny jeneraly Rakotondrazaka Andry, lehiben’ny fari-piadidiam-paritany Zandarimaria Antananarivo teny Ankadilalana, omaly.
Fihoaram-pefy :: Zandary mamo nitifitra olona tsy nahy
Fisolokoiana :: Mpivady enjehina noho ny fisandohana ho polisy